Waa maxay daawo, sidee loo sameeyaa maxaase ka dhalan kara | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Duufaannada
Isbeddelka cimilada ayaa sababaya koror ku dhaca labadaba dhacdooyinka iyo soo noqnoqodka dhacdooyinka saadaasha hawada ee noocyada aan caadiga ahayn. Tan macnaheedu waxa weeye in ifafaalooyin kala duwan sida duufaanno iyo duufaanno ay ku dhici doonaan soo noqnoqosho badan, taas oo kicin doonta musiibooyin, abaaro dhaadheer iyo daadad saameyn weyn leh. Maanta waxaan ka hadli doonnaa waxa a daawo iyo halka laga samaynayo. Waa duufaan been abuur ah oo ka samaysanaysa badda Mediterranean-ka isla markaana beegsanaysa Griiga.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxa uu yahay daawo iyo saameynta ay ku yeelan karto.
1 Waa maxay daawo
2 Inta badan dhacdooyinka cimilada daran
3 Xaaladaha tababarka caafimaadka
4 Sidee duufaan loo sameeyay
Waa maxay daawo
Ereyga medicane wuxuu ka yimid duufaantii ka dhacday Ingiriiska. Waxay ka dhigan tahay duufaantii badda Mediterranean. Si kastaba ha noqotee, ma aha duufaan lafteeda, laakiin wali waxay yeelan kartaa saameyn aad u la mid ah. Xilliga dayrta ayaa ah mid ku habboon qaab-dhismeedkooda maaddaama ay jiraan xaalado deegaan oo ku habboon inay tan dhacdo.
Giriiggu waa bartilmaameedka dawada wuxuuna isu diyaarinayaa inuu helo xoog duufaan kuleyl ah oo lacag ka heli doona jasiiradaha galbeedka Ioniya. Duufaantan waxaa lagu baabtiisay magaca Ianos waxaana inta badan lagu gartaa iyadoo leh dabeylo duufaanno wata iyo roobab culus oo kicin kara sameynta daadad. Xawaaraha dabayshu wuxuu sababi karaa koronto la’aan meelaha qaarkood ee ay dabayluhu ku xoogan yihiin. Dabaylaha qaar ee ka xoog badan lana filayo waxay yeelan doonaan xawaare dhan 200 km / saacaddii. Marka laga hadlayo roobka, tiro u dhexeysa 200 ilaa 400 litir halkii mitir oo laba jibbaaran ayaa la filayaa saacado yar gudahood.
Fikrad ahaan, dadka ugu dhow wabiyada iyo durdurradu waa inay raadsadaan hoy kale si looga fogaado inay dhibaato ka soo gaarto daadadka suurtagalka ah. Dhinaca kale, muwaadiniinta intiisa kale waa inay xadidaan safarrada aan loo baahnayn si looga fogaado inay sababaan shilal waaweyn. Daawada Ianos waxaa loo arkaa duufaan kuleyl ah oo la mid ah duufaan. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay xoojin, kordhin iyo muddo la mid ah duufaan dhab ah. In kasta oo saynisyahannadu isku dayaan inay saadaaliyaan inta ugu badan ee suurtogalka ah saameynta xoog leh ee ay yeelan doonto, habsami u socodka meertadan laguma saadaalin karo sax dhammaystiran.
Inta badan dhacdooyinka cimilada daran
Sidaan soo sheegnay maqaallo fara badan, soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka leh noocyo aan caadi ahayn ayaa sii kordheysa. saameynta isbeddelka cimilada darteed. Si ay u dhacdo duufaan, biyaha kulaylaha ayaa loo baahan yahay si soosaarka biyuhu uu u noqdo mid aad u sarreeya oo ku dhaca samayska duufaanadan marka la samaynayo daruuraha. Kordhinta heer kulka badda Mediterranean-ka waxaa inta badan sabab u ah kuleylka adduunka. Kordhinta celceliska heerkulka adduunka ayaa sababi doonta kala duwanaanshaha qaababka cimilada. Tani waa sida tiro badan oo ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee ba'an ay u sameysmi doonaan isla markaana ka xoog badan sidii aan horay u baran jirnay.
Maaha markii ugu horeysay ee daawo laga helo deegaankan. Sannadkii 1995 duufaannadan ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday dalka Giriigga. Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogyahay in isbeddelka cimilada awgood dhacdooyinkan saadaasha hawadu ay noqdeen kuwo aad iyo aad u soo noqnoqda sannadihii la soo dhaafay. Duufaan kale oo tan lamid ah ayaa ku dhacday Griiga sanadkii 2018. Fatahaado Fatahaada ah ayaa halkan lagu arkay, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof boqolaalna ay hoy la’aan noqdeen Duufaannada waxaa loogu yeeraa medicane maxaa yeelay waxay ku soo gaabinaysaa duufaanka Mediterranean.
Ianos ayaa la filayaa inuu ku dhufto laba mowjadood. Midka koowaad ayaa sida caadiga ah kan ugu awoodda badan halkan, wuxuu la yimaadaa huurka. Midda labaad waxay lamid noqon doontaa gariir gariir ka dib. Toddobo ka mid ah gobollada ku yaal galbeedka Giriigga ayaa ah kuwa la geliyay heegan sare ka hor duufaanta. Waa mas'uuliyiinta go'aan ka gaadha goor dambe iyagoon heegan buuxa gelin gobolka ballaadhan ee Athens, Attica iyo Corinthians.
Xaaladaha tababarka caafimaadka
Nooc ka mid ah duufaanta kulaylaha ee kuleylaha ah si loo horumariyo, waxaa loo baahan yahay bad dhexdhexaad ah oo xiirkiisu hooseeyo iyo jawi qoyan oo qoyan. Waxaan ognahay in badda mediterranean-ka, marka loo fiiriyo baaxaddeeda iyo deegaan ahaan juquraafi ahaan, aysan ahayn bad buuxisa shuruudaha sameynta nidaamkan saadaasha hawada ee noocan ah. Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladaha qaarkood ay dhacaan, gaar ahaan xilligan oo kale sanadka, xaaladahaas lagama maarmaanka u ah horumarinta duufaan kuleylka ah ayaa la bixin karaa. Duufaannadani waa nooc ka mid ah iskudhafyada u dhexeeya duufaannada kulaylaha iyo kuwa aan kulaylaha ahayn.
Xaaladda Ianos waxaa jira jeeb daciif ah oo hawo qabow dherer ahaan. Maaddaama ay jiraan ereraajiyada dusha sare, xaaladahaas waxaa loo awooday in loo isticmaalo in lagu bilaabo geeddi-socodka qulqulka. Iyada oo loo marayo habka isdhaafsiga, sameynta duufaan ayaa dhaceysa kaas oo hela astaamaha duufaanka kuleylaha. Waxaan horay u soo sheegnay, Maaha markii ugu horeysay ee duufaano nuucaan ah ay ka abuurmaan gobolkan. Waxaa badanaa la soo saaraa celcelis ahaan 1 ama 2 sanadkii waxaana badanaa loo yaqaan medicanes.
Marka la eego xoojinta iyo xaaladaha tababarka ee Ianos, tani waxay noqon doontaa daawo gaar ah.
Sidee duufaan loo sameeyay
Si ay duufaan u samaysmaan, waa inay jiraan tiro badan oo hawo diirran oo qoyan (caadiyan hawada kulaylaha waxay leedahay astaamahan). Hawo diirran oo qoyan ayay duufaanta u isticmaashaa shidaal ahaan, laga bilaabo halkaas ilaa ay ka sameysmaan, caadi ahaan, agagaaraha dhulbaraha.
Hawada ayaa ka kacda dusha sare ee badaha, iyadoo ka dhigeysa meesha ugu hooseysa hawo yar. Tani waxay abuureysaa aag cadaadis hoose oo hawo leh oo u dhow badda, maaddaama ay jirto hawo yar halkii cabbirkiiba.
Wareegga caalamiga ah ee hawada hareeraha meeraha, cufnaanta hawadu waxay ka dhaqaaqdaa meesha ay hawadu badan tahay waxayna u dhaqaaqdaa meeshii ay wax ka yar yihiin, taas oo ah, aagagga cadaadiska sarreeya iyo cadaadiska hoose. Marka hawada hareeraha aaggii looga tegey cadaadis hoose ay u dhaqaaqdo inay buuxiso "farqigaas", isna wuu kululaadaa wuuna kacayaa. Maaddaama hawada diirran ay sii socoto inay kacdo, hareeraha hareeraha ah ayaa wareegaya si uu booskiisa u qaato. Marka hawada soo baxaysa qaboojiso, iyadoo qoyan ayay samaysataa daruuro. Markuu meertadani socoto, daruuraha iyo nidaamka hawada oo dhami way wareegayaan oo korayaan, oo ay shidayaan kuleylka badda iyo biyaha uumi baxa dusha sare.
Dhammaan xaaladahaan deegaan waxay sababayaan sii kululaynta adduunka ee isbeddelka cimilada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan dawada waxa ay tahay iyo saameynteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daawada